Greencore: Fanasongadinana Ny Feon’ireo Mongôla Momba Ny Fahasimban’ny Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2012 15:51 GMT
Ny tanjon'ny tetikasa dia ny hiantohana ny fijerena sy fanaraha-mason'ireo olom-pirenena ny vola miditra amin'ny indostria mpitrandaka harena ankibon'ny tany ary mamantatra ny fomba fahatakaran'ny indostria mpitrandaka harena ankibon'ny tany ny andraikiny ara-tsôsialy sy fandraisany andraikitra amin'ny fanaovana tatitra ny fitantanam-bolany. (misimisy kokoa eto)
Fahasimban'ny tontolo iainana noho ny amin'ny indostria mpitrandaka harena ankibon'ny tany. Sary natolotry ny ONG Greencore
Ny hevitra notsoahana sy ny vokatr'ilay tetikasa ihany koa dia naparitaka tamin'ny alalan'ny haino aman-jery samihafa ka isan'izany ny bilaogy Nomadgreen tohanan'ny Rising Voices ary izany no mety ho dingana fanalahidy mankany amin'ny fiantohana ny andraikitra ara-tsôsialy, ny fangaraharàna any amin'ny indostria mpitrandaka harena ankibon'ny tany sy ny fampandrosoana ara-drariny.
Nadikan'i Mongoloo ny tatitra iray mikasika ny dian'ny Greencore tany Tasmag, Matad ao amin'ny faritanin'i Dornod ao amin'ny Tranonkala Nomad Green:
Ny tena tanjonay tamin'ny fandehanana tany Tasmag dia hahafantatra ny hetsika tena misy marina na ny fampandehanan-draharaha ataon'ny orinasa mpitrandraka PetroDaichin China Tsamsag amin'ny toerana ambony ary hizara ny zava-boahangona amin'ny hafa satria ireo olona ao an-toerana dia tsy milaza zavatra tsara mihitsy raha ny momba ny fampandehanan-draharahan'ny orinasa tao anatin'ny 10 taona mahery. Fanampin'izany, antony hafa ihany koa ny hamantatra ny fisokafan'ny orinasa amin'ireo olom-pirenena tsotra, ary ny hahatsapa ny zava-misy ao amin'ny orinasa raha tena raisin'izy ireo ary ekeny ny hevitry ny olona na ny fangatahany. Na dia izany aza, tsapako fa tsy mora ny manatanteraka ireo fikasàna voalaza etsy ambony rehefa heno ny resaky ny olona sasany.
Ity misy fanadihadiana iray miaraka amin'ny Ms. Ulziichimeg, lohan'ny Masoivoho Fanarahamaso Manokana ao amin'ny faritain'i Dornod momba ny fampandehanan-draharaha sy ny hetsika ataon'ny orinasa Petrochina Daichin Tamsag:
Ms. Ulziichimeg: nandinika sy nizaha ny orinasa izahay ny volana Jona tamin'ny taona lasa. Ary vokatr'izany dia, fandikàna ny Toko faha-47 no tsikaritra. Mba hahazoana namaofivaofy ny fandikàn'izy ireo izany, nandefasana fitakiana maika tany amin'ilay orinasa sy napetraka ny daty farany hanatanterahany izany.
I Otgoo Jargal tonian-dahatsoratra ao amin'ny tetikasa Nomad Green vatsian'ny Rising Voices ao Mongolia dia niditra tao amin'ity tetikasa ity ary nanampy anay nandika ny sasan-tsasany tamin'ireo famintinana lehibe.
Ireto misy vokany vitsivitsy azo nandritry ny fanadihadiana natao sy ny dingana fanaraha-maso ary navoaka tao amin'ny bilaogin'ny Greencore:
Ny fifandraisana amin'ny Sinoa:
Ny orinasa Petrochina Dachin Tamsag dia nandoa: 38.220.022 lavitrisa “tugrugs” ho an'ny Govenemanta, fa i Matad (tanàna) kosa izay tsy ahitàna herinaratra ary ireo zavatra tena ilaina ho amin'ny fivoaran'ny zanak'olombelona dia tavela lavitra any aoriana ao amin'ny firenena .
Tena avo dia avo ny tahan'ny fahantrana sy ny tsy fananan'asa ao Matad, nefa ny 90%-n'ny mpiasa ao amin'ny orinasa Petrochina Dachin Tamsag dia Sinoa avokoa.
Ny "yourtes"(tranolay) nentin-drazana. Sary natolotr'i Otgoo
Ny fahasimbàna ny “steppes” Menen:
I Matad dia ao anatinà fàtrana (steppe) mivelatra be antsoina hoe Menen, izay tsy hoe fotsiny ny lehibe indrindra ao Mongolia, fa izy koa no fàtrana farany sy tena lehibe indrindra tsy mbola voakitika maneran-tany. Siantifika maro sady manam-pahaizana manokana momba ny tontolo iainana no manoso-kevitra anay fa tokony ho atokanay ho toy ny vakoka ara-javaboahary iray ambaran'ny Firenena Mikambana izy io.
Ankehitriny kosa anefa, dia simba ity fàtrana mahafinarita ity ary na dia ny mpiompy ao an-toerana aza matetika dia very eny amin'ireo làlana nataon'ilay orinasa hikarohana sy hitaterana ny solika amin'iny faritra iny.
Ireo làlana mifanapatapaka manimba ny firindran'ny fàtrana ao Menen
Imbetsaka diso làlana izahay tao anatin'ny roa andro nandehanana tany na dia nisy mpitari-dia avy ao an-toerana aza nitarika anay. Sahiran-tsaina be mihitsy izahay. Isaky ny nijanona nanontany ny làlana izahay, dia nifanena taminà mpamily Sinoa maromaro nitatitra menaka ary tsy miteny Mongôla izy ireo. Mitomany mihitsy ireo mpiompy ao an-toerana noho ny fieritreretany indraindray raha mbola ao amin'ny taniny tokoa izy ireo na any Sina.